समृद्ध उपमहानगर बनाउने लक्ष्य छ - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
समृद्ध उपमहानगर बनाउने लक्ष्य छ - घनश्याम पाण्डे, मेयरका प्रत्यासी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
० चुनावी तयारी कस्तोे छ ?
– चुनावी तयारीका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट हामीले वैशाख ३१ लाई नै लक्षित गरेर व्यवस्थित चुनावी अभियान सुरु गरेका थियौं । निर्वाचन मिति सर्ने काम भए पनि पार्टीका तर्फबाट गर्ने सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । जस्तो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडा र टोलहरूमा संगठन कमिटी निर्माण गरिएको छ भने नगर स्तरको समन्वय कमिटी पनि गठन भइसकेको छ । त्यस्तै प्रचारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रचारप्रसार समिति पनि बनाएका छौं । प्रचारलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने काम पनि गरेका छौं । अर्को कुरा एमालेले उपमहानगरका १९ वटै वडाका अध्यक्षलगायत सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य र उपमहानगरको मेयर, उपमेयरको समेत टुंगो लगाएर घरदैलोमा पुग्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै सूर्य चिह्न लिएर आममतदातासमक्ष पुग्ने काम पनि भएको छ । यद्यपि उम्मेदवारको हिसाबले पुनः मतदाता भेटघाट पनि भइरहेको छ । त्यसैले चुनावी माहोल तातिएको छ, जनलहर पनि उत्तिकै छ ।
० नेताहरूले मत मात्रै माग्छन्, मत हाल्ने तरिका कसैले सिकाउँदैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । तपाईंले मतदान गर्ने तरिका सिकाउनुभएको छ कि छैन ?
मत मात्रै माग्दैनौं मतदाता शिक्षाको काम पनि हामीले गरिरहेका छांै । हुन त मतदाता शिक्षाको काम निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ । तैपनि हामीले जनताको घरदैलोमा पुगेर तीनवटा कुरालाई महŒवका साथ अगाडि बढाएका छौं । पहिलो कुरा नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियताका निम्ति निर्वाह गरेको भूमिका, सामाजिक सुरक्षा र खासगरी वृद्धभत्ताको कुरा र आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं भन्ने कार्यक्रमका निम्ति विगतमा गरेका गौरवशाली कार्यहरूलाई जनताका बीचमा लगेका छौं । दोस्रो कुरा एमालेले चुनाव जिते के गर्छ भन्ने एजेन्डाका विषयहरूलाई मतदातामाझ लगेका छौं भने तेस्रो कुराचाहिँ यो निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । व्यक्तिले हिजो कहाँ केमा भोट हाल्यो भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर जनता सधैं परिवर्तनकामी हुन्छन् र परिवर्तनका पक्षमा लाग्छन् । त्यस्तो अमूल्य भोट खेर नजाओस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूसमक्ष मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम लिएर गएका छौं ।
० तपाईंका चुनावी एजेन्डा के छन् ?
– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपालकै एउटा नमुना नगरका रूपमा विकास गर्ने हो । ७ सय ४४ स्थानीय सरकारमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नमुना बनाउनेछौं । जसलाई हामीले समृद्ध, सफा, हरित र जनसहभागिता भएको उपमहानगरका रूपमा विकास गर्नेछांै । हाम्रो भिजन के हो भने तुलसीपुर नेपालको पवित्र गन्तव्यस्थलका रूपमा, सुन्दर गन्तव्यस्थलका रूपमा यसलाई विकास गर्छाैं । युवाहरूका सपना कुल्चिएका, मरेका र बाटो नपाएका अन्य नागरिकहरूका सपनाहरूलाई फूलको थुँगाझंै उनेर माला बनाउँछांै । त्यो माला बनाउने नगरवासीको सपनालाई साकार बनाउँछौं । सुन्दर, हरियाली, स्वच्छ र समृद्ध उपमहानगर बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
० अलि प्रस्ट भनिदिनोस् न ?
– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई जोड्ने सडकहरूलाई पाँच वर्षभित्र कालोपत्रे गर्छौं, टोलहरू जोड्ने सडकहरूलाई सके कालोपत्रे नसके ग्राभेल गर्छौं । आउने पाँच वर्षमा नगरका कुनै पनि घर सडक सञ्जालबाट बाहिर हुने छैनन् । शुद्ध खानेपानीका लागि सबै घरमा धारा, धारा नपुग्ने ठाउँमा कुवा र धारा र कुवा पनि नहुने ठाउँमा हामीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी खानेपानीको उपलब्ध गराउनेछौं । तुलसीपुरमा धेरै कृषि क्षेत्र छ । त्यसको उपयोग नीति हामीले बनाउनेछांै । खासगरी कहाँ हरियाली बढाउने, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, कहाँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, कहाँ सामुदायिक वन क्षेत्र बनाउने, कहाँ सहरी क्षेत्र बनाउने, कहाँ निजी वनको विकास गर्र्र्ने, कहाँ कस्तो कृषि उत्पादन विधि तयार गर्र्ने यसको खाका तयार गर्र्र्र्र्र्नेछांै । उदाहरणका लागि कृषि, खानेपानी, विद्युत् र पर्यटनलाई आपसमा जोड्छांै । यीबाहेक समृद्ध नगरका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, जो हाम्रो नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।
० स्वास्थ्य र रोजगारको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन्?
– म भन्दै छु अवश्य पनि स्वास्थ्यका लागि यहाँ सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ ठाउँमा उपचार केन्द्रको विकास गर्न हामीले योजना बनाएका छांै । खासगरी १९ वटै वडामा एमबीबीएस डाक्टरसहितको स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ । अहिले बजारकेन्द्रित एम्बुलेन्सहरू वडाकेन्द्रित बनाउँछांै । उहाँहरू जानुभएन भने उपमहानगरपालिकाबाटै वडाबाट एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । तुलसीपुरमा ब्लड बैंक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनेछांै । अहिलेका वडा कार्यालय सरकारका सेवा केन्द्र हुन् । उनीहरूलाई भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाउँछौंं र कार्यालयवरपर साना सहरको विकास गर्र्छौं । अब बनाउने संरचनाहरू बालमैत्री, अपांगमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुनेछन् । सरकारी संरचना मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै सुविधायुक्त बनाउने मापदण्ड बनाएर लागू गरिनेछ । र, ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति स्पेसल ज्येष्ठ नागरिक हस्पिटल स्थापना गर्छौं । यस नगरभित्र रहेका मध्यपश्चिम क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, राप्ती अञ्चल अस्पताल, राप्ती अञ्चलस्तरीय आयुर्वेद अस्पताल र राप्ती आँखा अस्पतालहरूको क्षमता विकास गर्र्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र भविष्यमा कम्तीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्ने अवधारणा ल्याएका छौं । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका एउटा पवित्र वृक्ष तुलसीको नामबाट सुरु भएको छ । यो आयुर्वेद र संस्कृतिसँग नाम जोडिएको हुनाले यो संसारका निम्ति आयुर्वेद मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल एजुकेसन र टेक्निकल एजुकेसनको हबका रूपमा विकास गर्छौं । यसले वरिपरिका क्षेत्रमा धेरै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ ।
० चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न त गाह्रो होला नि ?
– यहाँ समस्या के भयो त भन्दा हरेक संस्था, संरचना, समूहमा हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा प्रस्ट नहुने, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने योजना नहुने र त्यो गन्तव्यलाई पछ्याउने कार्ययोजना नहुने समस्या छ । तर हामीसँग, नेकपा (एमाले)सँग तुलसीपुरको समृद्धि ल्याउने सपना छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना छ र योजनालाई पछ्याउने हामीसँग राजनीतिक शक्ति पनि छ । यो सबै काम गर्न सबैभन्दा पहिला नागरिकसँग संवाद गर्छौं । नागरिकलाई यो क्षेत्रमा लाग्न अपिल गर्छौं । अर्को कुरा त्यसका लागि लाग्ने बजेट, स्रोतका लागि भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेर व्यवस्थापन गर्छौं । यस्तै नेपालजस्तो देशलाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा सहयोग गर्र्ने सहयोगी हातहरूको समस्या छैन । तर, सहयोगी हातहरू भएका संस्थाहरूलाई सरकारलाई कहाँ सहयोग गर्ने योजना छैन, त्यो योजना हामी प्रस्तुत गर्छौंं । विश्वका महानगर र नगरपालिकासँग, विश्वका विकास साझेदार संस्थाहरूसँग स्वदेशकै निजी क्षेत्रसँग यहाँको उद्योग वाणिज्य संघ, होटेल व्यवसायी संघ, सहकारी, सामुदायिक वन यी सबैलाई परिचालन गर्छौं । समृद्धिको सपना मेरो व्यक्तिगत मात्र होइन, समृद्धिको सपना त हरेक नगरवासीहरूको पनि हो । यो सबै गरियो भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका देशकै नमुना बन्नेछ । मान्छेहरूका लागि यो ड्रिम सिटी हुनेछ ।
० ड्रिम सिटीभित्र यहाँका मौलिक संस्कार, संस्कृति अट्छन् त ?
– अवश्य पनि । यहाँका मौलिक कला, संस्कृति, संस्कारलाई जीवन्त राखेर, जगेर्ना गरेर यसलाई ड्रिम सिटीका रूपमा विकास गर्ने हो । खासगरी दाङको सन्दर्भमा तीनवटा सांस्कृतिक पक्षलाई उजागर र संरक्षण गर्ने योजनामा हामी छौं । पहिलो कुरा थारू संस्कृति र भाषाको कुरा हो । यहाँ थारू समुदायको बाहुल्य छ । त्यसको संरक्षणका निम्ति हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा थारू भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नेर्छौं । जसले गर्दा उपमहानगरपालिका यो बहुल जातिको घरका रूपमा स्थापित हुनेछ । थारू संस्कृति र इतिहाससँग जोडिएको दंगीशरणलाई हामीले संरक्षण गर्नेछांै । भुयारथानहरूको संरक्षण गर्नेछौं । दोस्रो कुरा भनेको यहाँको आयुर्र्वेद र संस्कृत शिक्षासँग जोडएको कुरा हो र योसँग जोडिएको कुरा बबई सभ्यता र कोट सभ्यता हो । पहिलेपहिले हाम्रा पुर्खाहरू गर्मीको समयमा चिसो खान पहाड चढ्ने र जाडोको समयमा दाङ आउने चलन थियो । त्यसले मान्छे स्वस्थ बनाउँथ्यो । अहिले पनि दाङमा छिल्लीकोट, मुलकोट, स्विकोटजस्ता कोटहरू छन् । यिनीहरूलाई कोट सभ्यताको प्रतीकका रूपमा र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर त्यसलाई हिल स्टेसनका रूपमा विकास गर्नेछांै । गर्र्मीले छटपटाइरहेको अवस्थामा कोटमा पुग्ने रमाइलो गर्ने स्थानको रूपमा विकास गर्र्ने हो । अहिले त्यो क्षेत्र सबैभन्दा दुःखको ठाउँ भएको छ । तर भोलि त्यो सबैभन्दा आनन्द र सुखको ठाउँ हुनेछ । तेस्रो भनेको यो क्षेत्रमा हिन्दु, इसाई, बौद्धलगायतका विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ । संविधान प्रदत्त आफ्नो धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृतिको विकास एवं संरक्षण गर्न हामी सबैसँग समन्वय गर्नेछांै ।
० एजेन्डा सुनाएर मात्रै जितिन्छ त ?
– नेकपा (एमाले) को विगत, वर्तमान र भविष्यबारे सबैलाई थाँहा छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो विगत र वर्तमान पनि थाहा छ । हाम्रो उपमेयरको उम्मेदवार माया आचार्यको विगत, वर्तमान पनि सबैलाई थाहा छ । सबै वडाध्यक्ष र सदस्यहरूबारे पनि थाहा छ । राजनीतिक रूपमा एमालेले देशको समृद्धि, राष्ट्रियताको जगेर्ना, वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा जे ग¥यो, त्यसले जनताका बीचमा काम गर्ने पार्र्र्टी एमाले हो त्यसको चुनाव चिन्ह सूर्य हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । हिजो हामी २०५४ सालमा तुलसीपुर नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित भएर आउँदाखेरि नगरपालिकामा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने पैसा थिएन । नगरपालिकामा आफू बस्ने कार्यालय भवन थिएन, भाडामा बस्थ्यो । नगरपालिकाभित्र फोहर फाल्न ट्याक्टर आफ्नो थिएन, भाडामा लिनुपथ्र्यो । नगरपालिकाभित्र मासु काट्ने पसल, त्यसैको छेउमा अगरबत्ती बेच्ने पसल, त्यसको अर्काे छेउमा तरकारी बेच्ने पसल थियो, निकै अव्यवस्थित । त्यसले गर्दा बजार दुर्गन्धित थियो । गाउँमा विकासका नाममा बजेट जाने कुरा के हो जनतालाई थाहै थिएन । तर नेकपा (एमाले) को अगुवाइमा यी सबै कामको सुरुवात गरेका थियौं । त्यस्तै पाँचवर्षको अवधिमा तुलसीपुर नगरपालिकाको सुविधासम्पन्न कर्यालय भवनको निर्माण ग¥यौं । धुलो उड्ने पुरानो बसपार्कमा पुष्पलाल बालउद्यान निर्माण ग¥यौं । तुलसीपुरमा धुलो उड्थ्यो, त्यो बीचमा ग्रिनबेल्टको निर्माण ग¥यौं र त्यसको दायाँबायाँ फुटपाथ निर्माण ग¥यौं । कुनै पनि काम नगर्दासम्म असम्भव देखिने हो तर ग¥यो भने सबैभन्दा सजिलो काम त्यही देखिन्छ ।
० साझा पदमा जाँदा साझा चरित्र चाहिएला नि, तपाईं त एमालेको उम्मेदवार हो ?
– साझा व्यक्ति हुँदैन । उसको भूमिका, चरित्र साझा हुनुपर्छ । एमालेले त्यो साझा पदमा बसेर काम गर्न सक्ने देखेर मलाई अगाडि सारेको हो । हिजो तुलसीपुर नगरपालिकाको उपमेयर हुँदा मलाई एमालेकै उम्मेदवार भएर विजयी बनाइएको हो । तर जनप्रतिनिधि त सबैका थियौं । सोहीअनुसार काम पनि गरेका थियौं । चुनावमा जान कुनै न कुनै दल चाहिन्छ नै । म उम्मेदवार त एमालेकै हो, दुईमत छैन । तर साझा पदमा पुगेपछि हामी एमालेका मात्रै होइनौं, हुँदैनौं । सबै नगरवासीका प्रतिनिधि हुनेछौंं ।
० साझा भिजन त छ तर तपाईंलाई टुरिस्ट उम्मेदवार भन्छन् त ?
– म टुरिस्ट होइन । म टुरिस्ट भएर संसार घुमेको भने सॉचो हो । ज्ञान, शिक्षा र अनुभव भन्ने कुरा त्यो कुवाको भ्यागुतोलाई कुवाभित्रको पानी मात्रै थाहा हुन्छ । तर त्यो भ्यागुतो बाहिर निस्क्यो भने मात्र बाँकी संसार देख्छ । मेरो जिन्दगी मैले कुवाको भ्यागुतो भएर बिताउन चाहिनँ । मेरो जिन्दगीमा एउटा चिलका रूपमा संसार परिचर गर्ने अवसर पनि मिल्यो र म टुरिस्टका रूपमा संसार घुमें, अनुभव बटुलें, सिकें र ती अनुभव र सिकेका कुराहरूलाई म घरमा आएर मैले जहाँ मेरो घर थियो म त्यो कुरालाई गरेर देखाउन चाहन्छु । म टुरिस्ट बनेर गएको मान्छे हुँ, टुरिस्ट भएर यहाँ आएको होइन । म बरु संसारका टुरिस्टलाई तुलसीपुरमा ल्याउँछु र तुलसीपुरवासीले पनि टुरिस्टका रूपमा बाहिर जाने, हेर्ने, पढ्ने, घुम्ने, सिक्ने अवसर पनि म मिलाउनेछु ।
छाउगोठ नबसे देउता रिसाउँछन् ?